𝐂𝐮𝐧𝐭𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐱𝐢𝐥𝐢𝐠𝐠𝐚 𝐍𝐚𝐚𝐬-𝐍𝐮𝐮𝐣𝐢𝐧𝐭𝐚 – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka 𝐂𝐮𝐧𝐭𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐱𝐢𝐥𝐢𝐠𝐠𝐚 𝐍𝐚𝐚𝐬-𝐍𝐮𝐮𝐣𝐢𝐧𝐭𝐚
Hooyo walba oo naas-nuujinayso waxay is waydiinaysaa nooca cuntada ay ubaahanyahay inay qaadato si ilmaheedu u helo xaddiga caanaha uu ubahanyahay iyo nafaqo ku filan.
Naas-nuujintu waa habka ugu wanaagsan Ee ilmuhu kuhelo nafaqada aasaasiga.
𝐂𝐮𝐧𝐭𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐚𝐚𝐠𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐨𝐲𝐨𝐝𝐚 𝐧𝐮𝐮𝐣𝐢𝐬𝐚 𝐰𝐚𝐱𝐚𝐚 𝐤𝐚 𝐦𝐢𝐝 𝐚𝐡:
Khudaar cagaaran Ee caleemaha leh : khudaarbtaan waxay qani ku tahay fiitaaminada : vitamin A, vitamin C, folate, vitamin K, iyo macdanta : magnesium, calcium, iron iyo potassium waxayna daruuri u yihiin hooyada nuujinayso si ilmaheedu u helo xaddiga caanaha iyo nafaqada u ubaahanyahay .
Sareenka iyo cuntada baalka leh : waxa kubadan macdanta iron tasoo qaybka ah unugyada dhiigga muhiimna u ah hooyada si looga hortaga dhiig yari oo keeni karto soosaarista caaanaha oo yaraado.
Toonta :waxa kujiro qaybaha kaladuwan ee nafaqada sida fiitamiinada Vitamin C , Vitamin B6 , Thiamine (B1) iyo macdanta : Calcium, Magnesium , Phosphorus , iyo Iron waxayna kamidtahay khudaarta ugu waxtarka badan sida la ogaaday
Babaayga cagaaran : khudaartaan waxay ka qayb qaadataa soo saarista dheecaanka layiraah oxytocin oo keento in murquhu isku soo ururaan si loohelo awood caanaha lagu soosaari karo.
Karootada : waxay kamidtahay khudaarta qaniga ku ah vitamin A oo muhiim u ah hooyada xiliga naas-nuujinta vitamin A wuxu daruuri u yahay korniimada ilmaha.
Biyaha : caanaha xaddiga ugubadan waxay ka koobanyihiin biyo hooyada nuujinayso waa inay cabtaa maalintiiba ugu yaran labo litir (2 liters) oo biyaa.
Duxda layiraah omega-3 oo laga helo kalluunka iyo ukunta waxayna aasaasi u tahay korniimada maskax ahaaneed ee ilmaha.
Drdoogle(Caafimaadka iyo Nafaqada)
Previous articleWar cusub oo ka soo baxay Itoobiya oo ku saabsan biyo -xireenka Renaissance iyo biyaha wabiga Niil
Next articleDEG-DEG:Madaxtooyada Soomaaliya oo war ka soo saartay La-taliyaha Farmaajo Mr.Fahad Yaasiin oo lagu xannibey Jabbuuti.